Mpempe akwụkwọ Rubul Vulcanized, ịkpụ akpụ, Rubber Floor Mat - Skypro
Zute usoro roba anyị
Echebe Shock Absorption Anti-ileghara Diamond R ...
Iyi siri ike 40-50 eke golf rubbe…
Ejiri njem njem igwe eletriki mara mma dị elu ...
Skypro bụ ụlọ ọrụ a tụkwasịrị obi nke anyị nyere ihe karịrị otu afọ.
Eke roba roba
Ngwa: Solar laminating igwe silicone mpempe akwụkwọ; Akpụkpọ ite nwere oghere akpa; Vacum laminating igwe silicone mpempe akwụkwọ; Wood n'ọnụ ụzọ ámá laminating igwe silicone mpempe akwụkwọ. Silicone Cushioning pad nke igwe na-ekpo ọkụ ọkụ. wdg isi na-eji nri, ọgwụ, ọrụ, kemịkal mmepụta ihe.
Black neoprene mpịakọta mkpuchi mmiri rọba mkpuchi mkpuchi
Ngwa: Ngwa ụlọ, akụrụngwa akụrụngwa, ihe eji egwuri egwu, nka, nka, ihe eji eme njem, ihe eji achọ mma, ihe ịchọ mma, skates, akpụkpọ ụkwụ, ihe eji egwu egwuregwu azụ, akpa, ute; Ebube ikpere, akụrụngwa Egwuregwu, akpati akpụkpọ ụkwụ, nkwonkwo akpụkpọ ụkwụ,
Super mma adụ kọmputa òké oche pad
Ihe a na-eji skidproof na-akwado ya na akwa dị nro dị nro na-eme ka òké ahụ na-agagharị na ọbụnadị na-amị amị. A na-ejikwa akwa ọcha na blank maka mbipụta sublimation ede. Akara ma ọ bụ ihe oyiyi a na-ebipụta dị ka arịrịọ ndị ahịa, nke bụ ụzọ dị mma iji kpọsaa ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ ngwaahịa gị.
Ikike na-emegide mpempe akwụkwọ rọba na-enweghị ntụpọ
Custlọ ọrụ China na-emepụta NBR / Neo Loose Red Rubber Sheeting Rubber Mat Neolorida Finics Products Neo Loose Rolls maka ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri ndị nwere ike ịgba akwụkwọ na ndị na-emepụta Life n'elu ala na bọọdụ mgbochi mmiri nke China.
A na-eduga emeputa na soplaya nke elu mma ulo oru nchekwa nchekwa na China, Anyị nwere ike ezitekwara gị ya
Ngwakọta nke polymer na-agbanwe (roba & plastic wdg) na ihe ndị ọzọ na-ewusi ike (akwa, faibalas wdg).
Usedzọ mejupụtara ụzọ dị iche iche gụnyere ntinye, mkpuchi, mpikota onu, gluing wdg.
Ma ụfụfụ na rọba siri ike & ihe mpempe akwụkwọ plastik wetara na otu ma ọ bụ ọtụtụ n'ígwé.
Uche dị iche iche ma ahaziri iche maka ndị ahịa nwere ọrụ ODM & OEM.
Omenala shapes na nha nyere ma site okpomọkụ na-agwọ ebu ma ọ bụ na-anwụ-ebipụ dị ka Eserese si ahịa.
Ngwongwo ihe eji emeghari ahu nke edoziri tinyere ihe isi ike, njupụta, ikike iri, ihe eji agba agba, agba nwere ihe mgbochi, ire ọkụ (FR), mgbochi mmiri, ọgwụgwọ na-egbochi ndị ọzọ ..
Banyere Skypro Rubber
Nanjing Skypro Rubber & Plastic Co., Ltd. bụ onye nrụpụta ọrụ ọkachamara na -emepụta, na -ewepụta na mbupụ ụdị dị iche iche nke roba na eriri plastik gụnyere mpempe rọba, mpempe akwụkwọ roba, taịlị roba yana ngwaahịa roba ndị ọzọ anaghị egbochi ya.